Sai Kaw Khay – Mood for Movies
မိတ်ဆွေဟာ ရုပ်ရှင်ကြည့်တိုင်း ပြင်ပလောကယုတ္တိဗေဒနဲ့ ယှဉ်ထိုးကြည့်ရှုတတ်သူဆိုရင်တော့ ဒီကားကိုကြိုက်မှာမဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ ဒီကားမျိုးဟာ သူ့ကိုယ်ပိုင် ယုတ္တိဗေဒကို သူ့ဘာသာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးပါ။ ဒီကားကို ခံစားဖို့ ဒီကားရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာထဲ လိုက်ပါဝင်ရောက်မှရပါလိမ့်မယ်။ သို့တိုင်အောင်လည်း ကြိုက်မယ်၊ မကြိုက်ဘူးကတော့ ကျွန်တော် ဘယ်အတတ်ပြောနိုင်မလဲ။ မိတ်ဆွေအပေါ်မှာပဲ လုံးလုံးလျားလျားမူတည်တဲ့ကိစ္စ။ ဒီလို စကားခံနေရတာက ဒီကားရဲ့ ဇာတ်လမ်းဟာ တော်တော်အူကြောင်ကြောင်နိုင်လို့ပဲ။ လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်က * ခ
မိန်းမကြီးတစ်ဦးဟာ လူသွားလူလာ နည်းပါးတဲ့ လမ်းမကြီးဘေးမှာ လစ်လပ်လျက်ရှိတဲ့ billboards သုံးခုကို ငှါးရမ်းခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အောက်ပါ စာသားကို billboards သုံးခုမှာ ရေးတင်စေခဲ့တယ်။ "Raped while dying", "And still no arrests?", "How come, Chief Willoughby?". မသိတဲ့သူအတွက်တော့ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ဘာမှန်း အဓိပ္ပါယ်မပေါက်နိုင်ပေမယ့် Ebbing မြို့သားတွေကတော့ စာသားတွေကိုမြင်တာနဲ့ ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာနဲ့ ဘယ်သူ့လက်ချက်ဆိုတာကိုပါ တန်းသဘောပေါက်ခဲ့ကြတယ်။ Mildred Hayes...............တစ်ခုလပ်မိန်းမကြီး၊ သားတစ်ဦးနဲ့ လ
ကောင်းမွန်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အပိုင်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှ Acting အပိုင်းဟာ ထင်သာမြင်သာအရှိဆုံးအပိုင်းလို့ ဆိုလို့ရမယ်။ ခုမှရုပ်ရှင်စကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအဖို့တောင် တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ရင် သတိမထားမိဖို့ခက်လှတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လဲ သရုပ်ဆောင်ကောင်းမွန်မှုမှာ နှစ်လိုစွာ စီးမျောသဘောကျနေမိရင်း ရုပ်ရှင်ရဲ့ အခြားသော ညံ့ဖျင်းတဲ့အပိုင်းများကို သတိမမူမိတဲ့အထိဖြစ်တတ်တယ်။ ပြောချင်တာက သရုပ်ဆောင်များရဲ့ ထင်သာမြင်သာရှိမှုနဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်မှုကိုပါ။ Midnight Cowboy ဟာ သရုပ်ဆောင်
ယနေ့ခေတ် မော်ဒန်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ "racism" ဆိုတဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကို ကွယ်ပျောက်သင့်ပြီဖြစ်တဲ့ မကောင်းသောအရာအဖြစ် လက်ခံလာကြပြီဖြစ်တယ်။ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ လူမှုအဆောက်အအုံရဲ့ အရွှေ့ဟာ racism ပပျောက်သွားဖို့ဘက်ကို ဦးတည်လာပါတယ်။ အမေရိကန်တို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီမိုကရေစီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံ၊ မျှတမှန်ကန်တဲ့ constitution ကို အခြေခံထားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြသဖို့ သူတို့ရဲ့ထက်မြတ်တဲ့လက်နက်ဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားများနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး၊ လိင်အမျိုးအစား ခွဲခြားမှုကို ဆန့်
ငယ်ငယ်က လူကြီးတွေ ယုံတမ်းပုံပြင်လိုလို ပြောတာ ကြားခဲ့ဖူးတယ်။ ကျတ်တစ္ဆေတို့၊ ကျတ်ကုန်းတို့။ ကျတ်တစ္ဆေများဟာ လူယောင်ဖန်ဆင်းပြီး အိမ်တွေထဲထမင်းဝင်စားတတ်တာတို့၊ တောထဲတောင်ထဲသွားရင် ကိုယ့်အိမ်သားအသံကိုတုပြီး ကိုယ့်နာမည်ကိုအော်ခေါ်တာမျိုး လုပ်တတ်တယ်တဲ့။ အဲတာကို ကိုယ့်အိမ်သားမှတ်လို့ ထူးမိရင် ဝိညာဉ်နုတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကြောင့် ကလေးဘဝက ကျတ်ဆိုတာကြီးကို ဘာမှန်းမသိဘဲ အသေကြောက်ခဲ့ရတာပဲ။ ကလေးအချင်းချင်းကြားမှာတောင် ညမှောင်ရင် တစ်ယောက်နာမည်တစ်ယောက်မခေါ်ကြေး၊ တော်ကြာ ကျတ်ကြားသွားရင် လိုက်တုပြီး ခေါ်လိမ့်မယ်နဲ
ဇာတ်ကားရဲ့ အဖွင့်ခန်းက တော်တော်စားတယ်။ ဇာတ်လိုက်ရဲ့ သမီး ရေနစ်သေတဲ့အခန်း။ အဖြစ်ဆိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အာရုံသိမှုကို ပရိသတ်ထံပို့ပေးလိုက်ပုံက သင်းတယ်။ နိမိတ်ပြပုံတွေ၊ intercuts များ ခပ်မြန်မြန်ကစားထားပုံတွေ၊ နောက်ပြီး ဂီတသံမပါတဲ့ တိတ်ဆိတ်မှုတွေကို ဒီအဖွင့်ခန်းမှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဗရမ်းဗတာပုံစံမျိုး တည်ခင်းပြထားတယ်။ ဒါဟာ တစ်ကားလုံးအတွက် သုံးသွားမယ့် စတိုင်ပဲလို့ ကြေညာလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက်ကြီးအပြီး ကာလတစ်ခုအကြာမှာ ဇာတ်လိုက်ဟာ ဗင်းနစ်မြို့ကိုရောက်ရှိလို့နေတယ်။ သူဟာ ဗင်
၁၉၆၀ ဝန်းကျင်လောက်က ပြင်သစ် ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးဆရာတစ်စုဟာ မြင်နေရ တွေ့နေရတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေအပေါ်မှာ အားမလိုအားမရဖြစ်လွန်းလို့ ဒါလောက်တောင်ဖြစ်တာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရိုက်မယ်ကွာဆိုပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထရိုက်ကြရာကနေ ကမ္ဘာ့လှုပ်ခတ်နိုင်စွမ်းအကြီးမားဆုံး ရုပ်ရှင်တော်လှန်ရေးတစ်ခုအဖြစ် French New Wave ဆိုတာကြီးကို မွေးဖွားပေးလိုက်ကြတယ်။ အဲသည့် ဝေဖန်ရေးဆရာတစ်စုထဲမှာ Francois Truffaut ဟာလည်း တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ ကျွန်တော့်စိတ်ထင်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ အတူတူလှုပ်ရှားခဲ့ကြသူတွေထဲ (ထားပါတော့) Godard တို့၊ Robert B
Ingmar Bergman ရဲ့ "Hour of the Wolf" ဟာ တသီးတသန့်ပရိသတ်ကိုရှာရမယ့် ပုဂ္ဂလိကဆန်တဲ့ ရုပ်ရှင်ပါပဲ။ ဆိုချင်တာက သာမန်ရုပ်ရှင်ကြည့်သူတွေ နှစ်သက်မယ့်ကားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ (ကြည့်ရတာ) ခက်ခဲတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး အားလုံးခြုံကြည့်ရင် အောင်မြင်တဲ့ရုပ်ရှင်လို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူး။ "စနှိုးဝှိုက်နှင့် လူပုလေးခုနစ်ယောက်" မှာ ဒစ်စနေးက ကလေးတွေဆီက မယုံကြည်နိုင်စရာတွေကို ခဏပစ်ချထားဖို့ တောင်းဆိုခဲ့သလိုမျိုးပဲ Bergman ဟာလည်း ပရိသတ်တွေဆီက စိတ်ကူးကွန့်မြူးမှုကို လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော် သတိထားမိတဲ့ လူကြီ
ဒုစရိုက်မှုကို အခြေခံတဲ့ drama သို့မဟုတ် thriller များကို ကျွန်တော်တို့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြည့်နေမိကြတာ ဘာကြောင့်လဲ။ တော်တော်များများက ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုအခြေခံတာ၊ သို့မဟုတ်ရင်တောင် အဖြစ်မှန်နဲ့နီးစပ်တာမျိုးမို့လို့ နှစ်သက်မိတာလား။ ဇာတ်ကားကချပြတဲ့ သဲလွန်စလေးများကို ခြေရာခံပြီး တရားခံဘယ်သူလဲ ဉာဏ်ကစားရတာကိုသဘောကျလို့လား။ ရင်သိမ့်ဖိုစရာကောင်းတဲ့ ပြကွက်တွေကြောင့်လား။ ဒုစရိုက်မှုကြီးကနေ ဗဟိုချက်တည်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုမုန်တိုင်းကြီးထဲ လိုက်ပါရတာကို နှစ်သက်လို့လား။ သို့မဟုတ် crime thriller/drama ဇာတ်ကားတွ
About Elly (2009) အပျော်ခရီးစဉ်လေးတစ်ခုကနေအစပြုတယ်။ Sepideh က ခေါင်းဆောင်စီစဉ်တဲ့ ဒီခရီးစဉ်မှာ Sepideh တို့လင်မယားနဲ့သမီးလေး၊ နောက်ထပ်လင်မယားအတွဲ နှစ်စုံနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်၊ လူလွတ်အနေနဲ့က ဂျာမနီကပြန်ရောက်တာမကြာသေးတဲ့ တစ်ခုလပ် Ahmed နဲ့ Sepideh ရဲ့သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်၊ Sepideh သမီးရဲ့ဆရာမလည်းဖြစ်သူ Elly......အားလုံးပေါင်း ၁၁ ယောက်ပါဝင်ခဲ့တယ်။ Elly ကလွဲပြီး ကျန်သူများအားလုံးဟာ ပြောမနာဆိုမနာသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ Elly ကို ဒီခရီးစဉ်မှာ မပါပါအောင် ဆွဲဆောင်ခေါ်ယူခဲ့တာကတော့ Sepideh ပဲဖြစ်တယ်။ ဒီခရီးစဉ်ရဲ
Y Tu Mamá También (2001) Tenoch ရဲ့အဖေက နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာပါ ဝင်ဆန့်တဲ့ မျက်နှာကြီး သူေဋ္ဌးတစ်ဦး၊ Julian ကတော့ သာမန်မိသားစုလေးက သာမန်ကောင်လေးတစ်ယောက်ပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အခင်ဆုံး၊ အတွဲဆုံးသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ နှစ်ယောက်လုံးက လူငယ်ဘဝရဲ့အထွတ်အထိပ်ကာလကိုရောက်နေကြသူတွေပီပီ တက်ကြွမှုအပြည့်၊ လိင်စိတ်နိုးကြားမှုအပြည့်၊ မနာလိုဝန်တိုခြင်း၊ ရှက်ရွံ့သိမ်ငယ်ခြင်း နတ္ထိ၊ ပူပန်မှု နတ္ထိ။ အရာရာတိုင်းဟာ သူတို့အတွက်တော့ လှောင်ပြောင်ရယ်မောစရာ။ သူတို့ရဲ့ ရည်းစားသနာ အသီးသီးဟာ ခရီးထွက်သွားကြတဲ့အခါ သူငယ်ချင်